Abavelisi beebhakethi zeebhakethi - China iBhakethi yeminqwazi yeebhakethi kunye nababoneleli
Isisongelo seFlethi esongelayo esikhuselayo selanga sokuGcina ukuhamba
Ukukhuselwa kwelanga ngokugqibeleleyo: Oku Isigqubuthelo selanga esongwayo esongekayo yenziwe ngelaphu le-UPF 50+ le-UV elikhuselayo elithintela i-98% yemitha ye-UV eyingozi. Eyethu Ukukhusela iminqwazi yelanga izakukhusela ubuso bakho, intamo kunye neendlebe kwimitha yelanga eyingozi
Ubunzima kwaye buyaphefumla: Yenziwe ngomgangatho weplesterester engasindi, esongekayo kwaye engenamanzi; amacala okuphefumla okuphefumla okungcono komoya owenza ukuba intloko yakho ihlale ipholile kwiintsuku ezishushu
Intloko yangaphandle yeNtloko efihliweyo ye-Mesh Sun Hat yaMadoda amaTyhini
UMSEBENZI WESIBINI: umnqwazi welanga ofihliweyo ifaka indawo enemnatha efihliweyo ngaphezulu efihla intloko epheleleyo yengcongconi yokugada bug. Yitsale nje phezulu, uyihlengahlengise kubungakanani bentloko yakho kwaye uzilungiselele ngokupheleleyo ukonwabela imisebenzi yangaphandle ngaphandle kweengcongconi, iimpukane, izinambuzane kunye ne-bug. Anti-Mosquito Hat okanye iLanga
Ukuloba ehlotyeni kunye noKhuseleko lweNtaba iiHats
Ukuthuthuzela kunye nokuphefumla ukuvuleka kweMesh: Akukho nto ihlekisayo xa yonke into ivakalelwa kakhulu. Ke siyigcinile le nto Ihlobo ukhuseleko lokuhamba intaba iminqwazi yelanga phezulu ukuze uphefumle kamnandi. Esi sigqubuthelo sobuso + intamo yeflap eyahlukileyo ineefestile zomoya ezivumela ubushushu ukuba bubaleke kwaye buyithintele ukuba ingabinanto. Yenza izinto zenziwe ngale combo TOUGH.
Izinto eziza ngaphandle kokubila: Ngaba ubila kakhulu? Ungakhathazeki! Yenziwe ngokusebenzisa i-nylon yeprimiyamu, le ayisindiIhlobo ukhuseleko lokuhamba intaba iminqwazi yelanga ukufunxa kunye nokubila ukubila ngokukhawuleza kuneminqwazi esekwe kumqhaphu. Iyomisa ngokukhawuleza ukuze uyisebenzise xa uyifuna. Iqabane elifanelekileyo le-odysseys yakho elandelayo yangaphandle.
Ileyibheli yesiqhelo Ilogo yeBhasikithi yeBhakethi yeNtloko yomlobi
Izinto eziphathekayo, imibala, isitayela kunye neenkcukacha zeBucket Hat zingenziwa ngokwemfuneko yakho. 2. Uthotho lweKapa: iBucket Hat, iKepu yezemidlalo yangaphandle, iNtengiso yeNtengiso, ikepusi ye-baseball, ikepusi yasemkhosini, ikepusi ye-Kid, ikepusi yabantwana, ikepusi yasebusika, i-Camouflage Bucket Hat, ikepusi ehlanjiweyo, i-Fisherman Hat njl. kwimibuzo yakho yamva nje ngaphakathi kweyure ye-12. 4.Uqinisekisiwe ngomgangatho onokuthenjwa nasemva kwenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa, uya kukuvuyela ukufumanisa ukuba ukungenisa ngaphakathi ngokuthe ngqo kuthi kulula kwaye kulula njengoko uthenga kubathengisi bendawo kodwa ngamaxabiso afanelekileyo kunye nokhetho oluninzi.